Ukuvuma - kungaphezu esungulwe kwezinkambiso kwezenhlalo nakwezombangazwe yokuziphatha kwabantu awacatshangwa ne amalungelo abanye umuzwa ndaba zalutho. Lesi senzo kuzuzisa kuphela umuntu ukwenza kubo, ngemiphumela lapho kuyinto infliction ngabomu noma budedengu yokuphatheka kabi ukulimaza abanye.
Freedom - lokhu ukuyekelela?
Ngezinye izikhathi inkululeko siqondwa njengoba ukuyekelela. Eqinisweni, imiqondo lawa ezifanayo umsindo, kukhona libe nencazelo ehluke kakhulu.
Freedom - liyisici esidingekayo impilo egcwele, injabulo kuyingxenye ebalulekile wonke umuntu kanye isisekelo esiqinileyo kunoma isiphi isimo lapho ukulawula kusekelwe nemigomo yentsandvo yelinyenti. Inkululeko kwezenkolo, inkulumo, uthando, nonembeza, ukunyakaza - nalezi zindlela yisisekelo ekuphumeleliseni ngalokuphelele ezihlukanisile nomphakathi. Freedom, okuyiwona wepi enqoba, iqala encane siqu ngokunqoba umuntu futhi iphela ukumelela kutimela wonke amazwe.
Umqondo inkululeko eduze kuhlanganiswe umthwalo (bona umphakathi) ukuthi umuntu ngamunye eliyibiza ngalo uqobo in inqubo ukwenza izenzo ezithile, ukuqonda ukusebenza sokuboshwa zicatshangwe kohlaka imikhawulo ekhona. Life emphakathini kuholela baphokophelele nenkululeko abantu abahlukahlukene, okudinga ilungelo, ngaphandle kokubukela phansi abanye, ukujwayeza. Kubalulekile ukuqonda ukuthi sinenkululeko engenamingcele akukwazi, ngoba abantu bahlale sincike yomphakathi - izimo (umthetho, amalungelo nenkululeko yabanye, amagugu yomphakathi, ukuhloniphana).
Freedom uphela okwamanje lapho izenzo izimisele kuthinte izithakazelo zabanye abantu isici ezimbi. Okungukuthi, abangabantwana ngabanye ezwa yena kuphela, it is njengenkulumo nenkululeko yabanye ezibonisa kuphela ukuzuza izithakazelo zabo. Senzeka ngaleso sikhathi inkululeko yakhe ikhula ezintabeni zase-ukuyekelela ukuthi esabekayo Eqinisweni, okuholela sezinxushunxushu. Wonke umuntu kumele kube sobala futhi baqonde ukuthi ukuyekelela yingozi. Isibonelo esimangalisayo kulesi zingakhiqiza French Revolution, lapho umqondo ngamalungelo angokwemvelo yomuntu beqonda umongo engafanele, okwagcina kuholele wobushiqela ephelele.
Ukuvuma - lena isigaba ezimbi zodwa, usekela ekubhujisweni, ubuhlungu nokufa, lubonakaliswa kahle ezingqondweni ezithile zezombangazwe futhi kwaholela izenzakalo ezinyantisayo emhlabeni wonkana. Ikhulu lamashumi amabili ukhunjulwa imibono eyesabekayo uHitler Stalin, okuyinto kwabulala izigidi zabantu.
Ukuvuma sibekwa ebuntwaneni?
Ngokuvamile ukuyekelela (omqondofana - "vsepozvolitelnost", "nezinxushunxushu", "bespredelschina", "vsenipochomstvo") kubantu sibekwa ebuntwaneni, lapho ingane, engazi ukwahluleka noma yini, ukuba akunike oyifunayo kalula futhi ngokugcwele. Kuyinto lokhu lula ukubulawa izifiso obangela ukukhula kwabo okungenangqondo njengoba evuthwa umuntu.
Ngokuvamile kulesi sikole nomndeni umkhuba, lapho wamemezela imfundo khulula senzeka kanye nomqondo ovulekile, njengoba isimiso yokuzibeka wengane kanye non-kuphazamisa inqubo yemvelo yokujwayela umphakathi. Agunyaziwe ngokuqhubekayo njengenkathi eyodwa experiment ukuyekelela - lena hambisa Tactical e inqubo Uthisha noqeqesho; kepha othisha kakhulu nabazali niqhubeke mayelana nezingane, wabavumela inkululeko, ukuthi imbangela umonakalo ezinganeni ngokwazo, ukudala ingxabano yawo nezwe elingaphandle nokuthuthukisa wabayisa okwakuvela ohlotsheni olukhethekile lwenkanyezi ezazizozuzisa - despotism. Ingane kunalokho ngokushesha ukuqonda ukuthi iyiphi indlela Wanqoba wayefisa, insimbi lapho kubonakala khona ukukhala, izinyembezi, hysterics.
ukuyekelela Hhayi ukuthi ziboniswe
Ngesikhathi impande ukuyekelela imele yokwesaba engenangqondo wonke umhlaba, futhi yena, ephoqa umuntu hhayi kuphela ukuvikela kodwa futhi ukuhlasela. ubuntu eqinile futhi beqiniseka neze esiphazamisayo nenkululeko lomunye umuntu. I ukuyekelela eziyingozi kakhulu - it is a zokuziphatha, okuthena amandla ubuntu ngaphakathi hhayi wabonakaliswa ngokucace kangaka. Njengoba kahle ngangokunokwenzeka ukuphila komuntu ephawula okushiwo yobuKristu futhi imiyalo 10 yanoma iyiphi umthetho futhi umthetho:
Hhayi ukuthi ziboniswe ukuyekelela ekwazi uku:
Uma kuziwa endabeni yokuziphatha kwagxilisa umndeni kusukela ekuzalweni;
basukile othile wekhulu zukulwane amasiko;
izindinganiso ezingokomoya of abazali bazo, esibekela isibonelo ngayo esizukulwaneni esisha, ukuphila kwabo nezenzo.
Smolny sezindela - ekudalweni okhazimulayo wizadi brilliant
Okungamelwe ukwenze nge hemorrhoids: imikhawulo